Somaliland oo iibisay dekeda Berbera & DF oo... - Caasimada Online
Home Warar Somaliland oo iibisay dekeda Berbera & DF oo…
Somaliland oo iibisay dekeda Berbera & DF oo…
Berbera (Caasimada Online) – Wararka laga helayo maamulka Somaliland ayaa sheegaya in xukuumada madaxweyne Siilaanyo heshiis lagu wareejinayo dekada magaalada Barbara la galayaan dakada Dubai ” Dubai World.”
Warar hordhac ayaa sheegaya in DP World ay maamuli doonto dekada magaalada Berbera muddo 17 sano iyadoo heshiiska mashruucaan lagu kala saxiixan doono magaalada Dubai 27 April,2015.
Wafti ka socda maamulka Somaliland ayaa la filayaa in maalmahaan soo gaaraan magaalada Dubai ee wadanka Imaraadka Carabta.
Xubnaha kamid ah waftigaan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, Mareeyaha dakada Berbera Cali Xoor Xor, Wasiirka ganacsiga Muuse Qaasim iyo xubno kale oo ku dhow xafiiska madaxweynaha.
Heshiiskaan ayaa la filayaa in DP World ku balaarin doonto dekada magaalada Bebera islamarkaana maamuli doonto shaqadeeda. Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa wel-wel ka muujiyey heshiiskaan iyo waqtiga uu ku soo beegmey madaama sanadka soo socda shacabka maamulkaas u dareeri doonaan doorashooyinka madaxweynaha iyo kuwa aqalka wakilada.
Wasiirka dekadaha dowlada Federaalka oo dhowaan la hadley saxaafada ayaa mamaulka Somaliland uga digey in heshiis la galaan shirkado maamula dekada magaalada Berbera. DP World ayaa sida la rumeysan la filaya in heshiisyo kuwaan la-mid ah la gasho maamulada kale ee ka jira Somalia kuwasoo laga magacaabey Puntland iyo Jubaland.
Dekada magaalada Dubai “DP World” ayaa maamusha 65 dekadood oo ku yaal Lixda qaaradood ee aduunka kuwasoo ku kala yaala wadamada Yurub, Africa iyo Asia gaar ahaan wadanka India.